यहाँ बिश्वाशको पोकोमा अबिश्वाश भेटिन्छ, असत्य सत्यको बुइ चढेर आउछ ,अनि प्रेम स्वार्थ बोकेर आउछ – Bhindai Kura
– निरन्जन ढकाल
कुनै दिन अपरिचित थियौ दिप अनि म । अपरिचित बाट हामी परिचित भयौ , परिचित ब्वट हामी एक अर्काको साथी भयौ । अनि साथी बाट हामी एक अर्काको मिल्ने साथी भैसकेका थियौ । उ सङ्ग हरेक कुरा साटिन्थ्यो । साना देखी ठुला सम्म । अनि क देखी ज्ञ सम्म । तर उ मलेशिया थियो अनि म नेपाल । भौतिक दुरी हेर्दा हामी एकअर्का सङ्ग धेरै टाढा थियौ , यती टाढा कि उस्लाई छोएर कुनै पवन म सम्म आइपुग्दैन थियो । तर हामिलाई नजिक गराएको थियो मनले अनि यो मित्रताले । उ यती टाढा भएर पनि म उस्लाई मेरो आफ्नै मन भित्र भेट्टाउथिए । म प्रेम गर्न थालेको थिए उस्लाई । कहि कतै यस्तो लाग्थ्यो कि उस्ले पनि मलाई प्रेम गर्छ होला भनेर । तर म उ सङ्ग प्रेममा बाधिन चाहान्न थिए । किनकी यहाँ बिश्वाशको पोकोमा अबिश्वाश भेटिन्छ । असत्य सत्यको बुइ चढेर आउछ । अनि प्रेम स्वार्थ बोकेर आउछ । त्यसैले म डराउन बाध्य थिए , कतै यो प्रेम पनि एउटा धोका त हुने हैन ? यो मनको पोकोमा गाठो पारिदिए अनि लुकाइदिए मेरो प्रेम यही मनको पोको भित्र । तर फेरि म दिपका शब्दहरुमा प्रेम भेट्थे । उस्को बोलिहरुमा प्रेम भेट्थे । उस्ले मलाई हेर्ने त्यो नजरमा प्रेम भेट्थे । सायद मेरो जस्तै उस्को मनमा पनि प्रेम पलाईसकेको थियो । सायद मैले जस्तै उस्ले पनि मलाई उस्को दिलमा सजाइसकेको थियो । मलाई यस्तै आभाश हुन्थ्यो कि दिपले यो रोजिलाई प्रेम गर्न थालिसकेको थियो । कहिले कही उस्ले सोद्थ्यो “खाना खायौ रोजी ? ” म झुट बोलेर भनिदिन्थे ” नाइ छैन । ” उस्ले प्रश्न राख्थ्यो “किन ? ” म निराश हुँदै भन्थे ” मन छैन । ” उस्ले उता बाट घुर्की देखाउथ्यो ” खाउ है नत्र म पनि भोकै बसिदिन्छु । ” उस्ले यसो भन्दै गर्दा म प्रेम भेट्टाउथिए । म सानो सानो घाउ उस्लाई देखाउथे र भन्थे ” हेर न घाउ भयो । दुखिराछ । ” उस्ले फोन बाटै फु -फु गरिदिन्थ्यो अनि सोध्थ्यो ” कम भयो दुख्न । ” म फिस्स हास्दै भनिदिन्थे ” बादर ।” उ पनि मख्ख पर्दै भन्थ्यो ” बादर्नी । ” यो पलहरुमा म उस्को न्यानो प्रेम आभाश गर्थे अनि मन मनै मुस्कुराउथिए । एकान्तमा पनि म उस्लाई सोचेर एक्लै मुस्कुराउन थालेकी थिए । उ सङ्ग गरेका च्याटहरु दोहोराएर पढ्न थालेकी थिए । उस्को तस्विर ज्ञालरिमा सेभ गर्न थालेकी थिए । उ कहिले अन आउछ भन्दै उस्लाईनै कुर्न थालेकी थिए । उ अन न आउन्जेल सम्म यो मनमा बेचेनी हुन्थ्यो , छट्पटी हुन्थ्यो । घन्टौ को कुराकानी पनि छिट्टै सकियो झै लाग्थ्यो । उ सङ्ग जती बोल्यो त्यती नै बोलिरहु जस्तो लाग्थ्यो , उस्लाई जती हेर्यो त्यती नै हेरिरहु लाग्थ्यो । कहिले कही लाग्थ्यो कि भनिदिउ उस्लाई कि ” म यती धेरै माया गर्छु दिप तिमीलाई” भनेर । तर फेरी रोक्थे आफुलाई । भन्दैन थिए ।मैले धेरै सोचे । लाग्यो , दिप परदेशी हो । परदेशिको के भर हुन्छ र ? आखिर यती धेरै टाढा छ उ म बाट । कतै मलाई खेलौना बनाएर रमाउने पो हो कि झै लाग्थ्यो ।मेरो मनमा डर थियो । मैले मन मनै निधो गरे उ सङ्ग टाढिने । अब उ सङ्ग नबोल्ने । अनि उ सङ्ग कुरा नगर्ने । मैले यो मनलाई उस्को मन देखी धेरै टाढा लाने निर्णय गरे । त्यती मिठो उस्को बोली अब कहिल्यै नसुन्ने निर्णय गरे । त्यती प्यारो मुहार अब कहिले पनि नहेर्ने निर्णय गरे । यती छिट्टै यती धेरै नजिक आएको उस्लाई फेरी पर धकेल्ने निधो गरे । उस्लाई फेरी अपरिचित घोसणा गरिदिने निर्णय गरे ।मैले उस्लाई मेसेज गर्न छोडिदिए । उस्लाई कल गर्न छोडिदिए । घरि घरि उस्ले मेसेज गर्थ्यो , घरि घरि उस्ले कल गर्थ्यो, मेरा औंलाअहरु हतारिन्थे , मेसेज रिप्लाई गर्नको निम्ती , उस्को फोन उठाउनको निम्ती । तर म रोकिदिन्थे , ति निर्दोश औंलाहरुलाई पनि । मलाई थाहा थियो , मेरो यो ब्यबहारले उस्लाई निकै नराम्रो लाग्दै थियो । बिना कारण कोही टाढा भैदिदा मन सबै भन्दा धेरै दुख्छ । सायद दिपको पनि मन निकै दुख्यो होला । यो सब गरेर मलाई पनि खुशी कहाँ मिल्यो र ? म बल्ल वल्ल सम्हाल्थे आफ्नो यो मनलाई । म रोइदिन्थे सिरक भित्र आफ्नै मुहार लुकाएर । दिपको तस्विर हजार बार हेर्थे , माफि माग्थे अनि रुन्थे । यता आफ्नो दिल दुखाउ थे अनि उता उस्को दिल दुखाउथे । ३ दिन जती यसै गरी बित्यो । तर उस्ले कल अनि मेसेज गर्न छोडेन । एक्दिन उस्ले मेसेज गर्‍यो” रोजी , थाहा छैन कुन गल्तिको सजाए भोग्दै छु । के गलत गरे मैले कि मलाई अचानक यती धेरै घृणा गर्न थाल्यौ ? आज बाट यो दिप मर्यो तिम्रो लागी । म थाके रोजी । मलाई माफ गरिदिनु । आज बाट तिमीलाई दुख दिने मेरो यो कल अनि मेसेज केहि पनि आउने छैन तिमीलाई ।म त सक्दिन तर बिन्ती तिमी मलाई ब्लक गरिदेउ है रोजी । ” उस्को यो मेसेजले मन चसक्क चस्कियो । कता कता दुखे झै भयो ।बर्सियो आशु थोपा थोपा । हत्केलाले आशु पुछ्न थाले । मैले उस्को मन दुखाए । जस्लाई प्रेम गरे उसैलाई दुखाए ।म कती स्वार्थी भएको थिए । म कती निर्दयि भएको थिए । लामो सुस्केरा ताने । र सोच्न लागे उस्लाई ब्लक गरौ या नगरौ ?
भाग दुइ पनि पढ्नुहोस
छोटो समयमै उ एउटा यस्तो आदत बनिसकेको थियोकी जस्लाई म स्वयमलेनै चाहेर पनि बदल्न सक्दैन थिए । उस्को आगमन सङ्गै धेरै कुराहरु बाहिरिएका थिए । हराएको थियो मेरो एक्लोपन्, मेरो दुख सबै हराएको थियो । मैले आफुलाक एक्लो भेट्न छोडिसकेको थिए । मैले उस्लाई मनमा राखिसकेको थिए । एउटा आत्मिय साथी बनिसकेको थियो दिप मेरो लागी । आज्कल उस्को नाम मात्र पनि प्यारो लाग्न थालिसकेको थियो । हामी बिच धेरै कुरा हुन थाले । मेरो मात्र होइन सायद उस्को पनि म आदत बनिसकेको थिए । मनमा उस्लाई भेट्ने रहर जाग्थ्यो , तर उ परदेशी थियो । परदेशको भुमिमा पसिना बेच्दै थियो । उ खुशी खोज्न परदेश गएको थियो । उ पनि त्यही मदन थियो , जो धन कमाउन परदेशी भएको थियो । एक दिन कुरै कुराको बिचमा उस्ले सोध्यो” रोजी एउटा कुरा सोधुम तिमीलाई ? ”
म :- दिप के हो र त्यस्तो कुरा ?
म सङ्ग पनि अप्ठेरो लाग्छ र ? सोधन ।
उ :- तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ ? यस पटक मैले झुट बोल्ने निर्णय गरे । झुट बोले ” छ नि । ” उ :- वाउ बधाइ छ । उस्को फोटो हेरौ न मिल्छ भने । उस्को यो अनुरोधले मलाई गाह्रो बनायो । आखिर मेरो प्रेमी कोही थिएन ।अब कस्को फोटो पठाउ उस्लाई ? म सोच्न थाले । झट पट दिमागमा बद्मासी आयो । मैले उस्कै तस्विर सेभ गरे फेस्बुकबाट अनि उस्कै तस्विर उस्लाईनै पठाउदै भने ” ल हेर त मेरो प्रेमी ? ह्यान्ड्सम छ है । ” मेरो कुराको जवाफ दिनु को साटो उ बेजोडले हास्यो अनि भन्न लाग्यो ” बादर्नी । यो त म हो नि । ” मैले जिस्काउदै सोधे ” किन मलाई माया गर्दैनौ र ? ” मेरो प्रश्नमा उस्को जवाफ आयो ” के भयो रोजी आज ? तिमी ठिक त छौ ? ” मैले कुरा सच्याउदै बोले ” हेहे ! जिस्केको मात्र । त्यस्तो नसोच न । ” उस्ले पनि फिस्स हास्दै भनिदियो ” उम्म मलाई थाहा छ । ” तर यो झुट थिएन । कही न कही अनि कतै न कतै यो मनको कुनै कुनामा उस्को निम्ती माया पलाउन सुरु भैसकेको थियो ।
हो उस्लाई माया गर्न थालिसकेको थिए ।त्यसैले त म उसै सङ्ग बोलिरहन्थे । जव बोल्दैन थिए उस्लाईनै खोजिरहन्थे । कहिले कही बोल्न नपाउदा , मन छट्पटाउन थाल्थ्यो । मैले दिनमै हजार पल्ट उस्को प्रोफाइल हेर्थे , त्यहाँ भएका उस्का तस्विर नियाल्दै , आफ्नो तक्दिरमा उस्को नाम लेखाउने कोशीश गर्थे । तर म प्रेम गर्न तयार थिइन । किनकि म सङ्ग एउटा डर थियो । प्रेमको डर । अझ भनौ झुटो प्रेमको डर । उस्लाई त मैले फेस्बुकमा भेटेको , फेस्बुकमै देखेको तर बास्तविक्तामा न त देखेको थिए , न त भेटेको नै थिए । अनी यो सताब्दी , यो त झुट मौलाएको सताब्दी हो । त्यसैलेत यहाँ धेरै कुरा झुट हुन्छ ,असत्य हुन्छ । अनि प्रेम पनि अप्रेम हुन्छ। म डराउन थालेको थिए , म उ सङ्ग प्रेम गरौला , तर उस्ले म सङ्ग प्रेमको नाटक गर्‍यो भने ? के म पनि ति अरु प्रेमी जस्तै रुनु , कराउनु ? कि कुनै डोरी सुर्केनो पारेर घाटिमा लगाउनु ? कि त बिष पिउनु ? म चाहान्न थिए कि मेरो मायाको बदलामा मलाई पनि अरुलाई जस्तै घात , पिडा , आशु मिलोस । मायाले खुशी दिन्छ भने पो माया लाउनु पर्छ ।
दुखै पाउन त आखिर किन माया लाउनु पर्‍यो ?मायाले त रोएको मुहार हसाउन सक्नु पर्‍यो , हासेको मुहार रुवाउन आखिर किन माया लगाउनु ? तर यो मन बाधेर कहाँ बाधिदो रहेछ र ? यो मन रोकेर कहाँ रोकिदो रहेछ र ? मनले कतै न कतै दिपको निम्ती माया बटुल्न थालीसकेको थियो । यो मनमा प्रेमको बृक्षारोपन भैसकेको थियो । तर म लुकाउदै थिए , दिप सङ्गबाट दिपलाई नै गरेको प्रेम ।म चाहान्न थिए उस्ले मेरो प्रेम देखोस , उस्ले मेरो प्रेम बुझोस , अनि यो मेरो प्रेमको गलत फाइदा लिगोस । समय बित्दै गयो । अशोज १५ देखी बोलेको हामी । पौष महिना सम्म पुगिसकेका थियौ । यो यात्रा मिठो थियो , मह भन्दा पनि मिठो , मिठाइ भन्दा पनि मिठो । मेरो एक्लोपन हराइसकेको थियो । आज्कल म एक्लो हुन्थे त त्यती बेला मात्रै जव दिप कतै व्यस्त हुन्थ्यो अनि म सङ्ग बोल्दैन थियो ।
महोत्तरीमा रहस्यमय मृत्यु प्रकरण : मृतकको संख्या ११ पुग्यो , सिंगो गाउ नै सोकाकुल